ကမ္ဘာ့ဖလား4ငြိမ်းချမ်းရေးဆု - နိုင်ငံတကာကုသိုလ်ဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းက "ကမ္ဘာ့ဖလား4ငြိမ်းချမ်းရေးဆု" ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
ဗီဒီယိုကို ICF W4P
ကျိကျိတက် Menu ကို
ဇင် Beton နေဖြင့်ပန်ကာ Baubles
ပန်ကာ Baubles W4P
စီမံကိန်းများ ICF W4P
လှည်း (0 items)
လှည်း: $ 0.00
တုံ့ပြန်မှု & Clean Layout
အမှန်ဆိုသည်ကား, အစွမ်းထက် & သုံးပါရန်လွယ်ကူသော
HAPPY NEW YEAR တွင်!
25.11.2018 BoanergesW4P မိသားစုအကြောင်း
သငျသညျကမ်ဘာပိုကောင်းစေချင်ပါသလား? မင်္ဂလာပါ! ကျနော်တို့ဘဝများစွာကိုကွဲပြားခြားနားသောလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေန်ထမ်းတစ်ဦးကနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ပိုကောင်းငါတို့သည်ပိုအမြင်များကျွန်တော်ယူကြောင်းယုံကြည်
MAG သတ္တုအလက်ဇန်းဒါး Moiseenko
sau လေးညှင်းပွင့ 2S1 အလက်ဇန္ဒား Moiseenko - ထိုပြုပြင် technique ကို APU ကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်း, သူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်များတွင်တင့်ကားများအလုပ်အကိုင်အမော်ဒယ်များခဲယမ်း otstrelyanyh ။ မိမိအအသေးစိတ်
15.11.2018 BoanergesW4P မိသားစုအကြောင်း
သငျသညျကမ်ဘာပိုကောင်းစေချင်ပါသလား? ယခု Join! မင်္ဂလာပါ Mindblown GIF များအနေဖြင့်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီး GIF ကိုစိတ်ထဲ! ကျနော်တို့ဘဝများစွာကိုကွဲပြားခြားနားသောလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေန်ထမ်းတစ်ဦးကနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကယုံကြည်ကြသည်
Bohdan Yaremenko အနိမျ့မျှော်လင့်ချက်များ? ဒါက Donald Trump ဟယ်လ်စင်ကီသမ္မတပူတင်နှင့်အတူအစည်းအဝေး၏အကြိုအပေါ်ပြောသောယျ။ ဒါဖြစ်သည့်အစည်းအဝေးများအတွက်အနိမ့်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်
09.07.2018 Boanergesကြောက်မက်ဘွယ် Post ကို
့ Yuri Butusov: အဆိုပါစကားလုံး "ယူကရိန်း" အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှကစားသမားအပြစ်ပေးရပါမည်သည့်အဘို့, Anti-ရုရှားကနိုင်ငံရေးကြေညာချက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်! ငါယူကရိန်း၏နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်နိုင်ငံခြားရေးရေးရာဝန်ကြီးကယနေ့လိမ့်မည်မျှော်လင့်
"ဂေါ်ဒွန်" ၏ယနေ့ဖွင့်ဝေဖန် edition အတွက်ရုရှားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင်နှင့်နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ Konstantin Borovoy အတွက်ရုရှားနှင့်စပိန်အကြားပွဲစဉ်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောဝယ်ယူ 1 / 8 ကမ္ဘာ့ဖလား၏ပမာဏကပြောသည်
ရုရှားနိုင်ငံ - ကို "ဂိမ်း" စပိန်တွင်
ပွဲတုန်လှုပ်စေသောထောက်ခံမှုပွဲစဉ်စပိန်မတိုင်မီ matchemPrognoz အကောင့်ခင်မှာ - FB ကိုးကား 2018 ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းရုရှားကဒါဟာ prekrassny ဘောလုံးဖေါ်ပြခြင်းတို့သည်ပုံမှန် command ကိုတစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းရဲ့
ဒီအယူကရိ 12 နှစ်များတွင်ပန်းပဲ၏အခြေခံကျွမ်းကျင်, နာမတော်ကိုဆာရှာ Bakhtar ဖြစ်ပါသည်, ကွင်းခတ်လုံးထွင်းနှင့်အမြန်အောင်ပွဲ၏အိပ်မက် forges ။ သူ 80% စေသည်
12.06.2018 Boanergesimage ကို3 မှတ်ချက်များ
ရုရှား၌ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ် FIFA'2018 ဘောလုံး - အရိုးတို့ကိုအပေါ်တစ်ဦးအားလပ်ရက်! YouTube ကိုဗီဒီယိုဖယ်ရှားပေး! လျှင်ဤင့်လင်းမြင်သာခြင်းနှင့်မိန့်ခွန်း၏လွတ်လပ်ခွင့်အပေါ်ငါ့ကိုပါ! Facebook က
W4P များအတွက် Alena (ရု။ )
ယူကရိန်း ... အဆိုပါအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ... တစ်ဦးအစွမ်းထက်သယံဇာတ, သဘာဝနှင့်လူ့နှစ်ခုလုံးကိုကူညီဖို့ကဒီမှာစီမံကိန်း W4PMy ကိုထောကျပံ့: ခွားပါရမီနှင့်အလုပ်ကြိုးစားသူလူများ၏အရေအတွက်သည် ... သို့သော်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အရည်အချင်းမရှိတဲ့, အကျင့်ပျက်နိုင်ငံရေးသမားများ vorovityh ၏
ICF ကမ္ဘာ့ဖလား4ငြိမ်းချမ်းရေးဆု TM 2018 ကတီထွင်
Varto P ကို ​​...